Sports | Samadhan
Sports	| September 11th |
Leaveacomment	पोखरा, २४ भदौ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सुशीललाई दूर्लभ सफलता
Sports	| September 4th |
Leaveacomment	काठमाण्डौ १७, भदौ । एसीसी यु–१९ प्रिमियर क्रिकेटमा नेपालका लागि सुशील कँडेलको अविश्वश्नीय बलिङ गर्विलो क्षण बनेको छ । नेपालले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनु परे पनि विश्व क्रिकेटमा दुर्लभ मानिएको बलिङमा सुशीलले बिहीबार आफ्नो नाम लेखाएका छन् । नवलपरासीका सुशील राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भने पोखराबाट खेल्छन् । गत वर्ष कुवेतमा भएको एसीसी यु–१९ प्रिमियरबाट सुशीलले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने अवसर पाएका थिए ।
कँडेलले मलेसियामा बिहीबार सम्पन्न साउदी अरेबियासँगको खेलमा १० मध्येको ९ ओभर मेडन फाले । दशौं ओभरको पहिलो बलमा उनले आफ्नो चौथो विकेट लिए । त्यसपछिको बाँकी ५ बलमा १२ रन खर्चे । साउदीका ब्याट्स म्यानले सोक्रममा एक छक्का र एक चौका पनि प्रहार गरे ।
सुशीलले लगातार ५५ बल डट फालेका थिए । उनले कुल १० ओभरमा १२ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । ‘म आफ्नो प्रदर्शनमा सन्तुष्ट छु अरु खेलमा पनि म यस्तै प्रदर्शन दिने प्रयास गर्नेछु,’सुशीलले भने, ‘मेरो ध्यान अब यु–१९ विश्वकप छनोटमा केन्द्रित हुनेछ ।’
अक्टोबर १४ देखि २३ सम्म मलेसियामै आईसीसी यु–१९ विश्वकप छनोट हुँदैछ । प्रतियोगितामा नेपालसँगै आयरल्यान्ड, पपुवा न्यु गिनी, युगान्डा र अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सुशीलले सोमबार मलेसियाविरुद्ध १० ओभरमा ८ रनमात्र खर्चेर १ विकेट लिएका थिए, जसमा लगातार ६ ओभर मेडन फालेका थिए ।
शक्ति गौचनले राष्ट्रिय टोलीबाट १० ओभरमा २ रनमात्र खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । सन् २०१२ मा मलेसियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ४ मा शक्तिले मलेसियाविरुद्ध ८ मेडन ओभर फालेका थिए, जुन नेपाली खेलाडीको एकै खेलमा यसअघिको सर्वा्धिक मेडन ओभरको कीर्तिमान थियो । उनले सो क्रममा लगातार ४१ बलमा कुनै रन दिएका थिएनन् । शक्तिको सर्वा्धिक मेडन र लगातार डट बलको कीर्तिमान सुशीलले तोडिदिए ।
शक्तिले सो खेलमा कुल ५८ डट बल फालेका थिए । यो कीर्तिमानको नजिक सुशील पुगेका थिए । अन्तिम ५ बलमा उनको बलिङमा साउदीका ब्याट्सम्यान अपत्यारिलो हिसाबमा आक्रामक बन्न पुगेका थिए । सुशीलले पहिलो स्पेलमा ८ र दोस्रो स्पेलमा २ ओभर बलिङ गरेका थिए । उनको आफ्नो १० ओभरको स्पेलको अन्तिम बलमा साउदीका पुछारका ब्याट्सम्यान जैनले छक्का प्रहार गरेका थिए ।
सुशीलले यस प्रतियोगितामा नेपालबाट सर्वाधिक २१ मेडन ओभर फालिसकेका छन् । युएईसँगको पहिलो खेलमा सुशीलले ७ ओभरमा ३ मेडन राख्दै ७ रन खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए । अफगानिस्तानसँग १० विकेटको पराजय बेहोर्दा नेपालले फालेको एकमात्र मेडन ओभर सुशीलकै नाममा थियो । सुशीलले प्रतियोगितामा कुल ११ विकेट लिए । यसैविच मलेसियामा जारी एसिसी यू–१९ प्रिमियर लिग क्रिकेटको अन्तिम खेलमा नेपालले साउदी अरेबियामाथि नौ विकेटको फराकिलो जित हात पारेको छ । मलेसियाको सेलोंगर क्लबमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको साउदी अरेबिया ३३.२ ओभरमा ५५ रन जोड्दा अलआउट भयो । साउदी अरेबियाका फैसल खानले १९ र जैनले ११ रनबाहेक अन्य कुनै ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । दुई ब्याट्सम्यान भने शून्य रनमै पेबोलियन फर्के ।
साउदी अरेबियालाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालका सुशील कँडेलले ४ तथा सुनिल धमला र प्रेम तामाङले दुई÷दुई विकेट लिए । कँडेलले १० ओभरमा नौ मेड्न राख्दै १२ रन खर्चिए ।
छपन्न रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले ९ ओभरमा एक विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो । नेपालका ओपनर सुनिल धमला ३४ रनमा अविजित रहे भने कप्तान राजु रिजाल १४ रनमा अविति रहे ।
साफ यू–१९ च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपाललाई
Sports	| August 30th |
Leaveacomment	समाधान सम्वाददाता
काठमाण्डौं, १२ भदौ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा दुई दशक लामो उपाधि बिहीन अवस्थालाई तोड्दै नेपाली टोलीले साफ यू १९ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा भारतलाई ट्राईब्रेकमा ५–४ ले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि उचालेको हो ।
सन् १९९३ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको साफ च्याम्पियनसिपको गोल्ड मेडल जितेयता यो नेपाली फुटबलको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो । अन्डर १९ फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन र गोल किपिङ प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्र ढाका साफ जित्दा नेपाली टोलीका सदस्य थिए ।
गोलकिपर सोजित गुरुङले भारतीय खेलाडी मोनुद्दिनको पेनाल्टी प्रहार रोकेपछि नेपालको जित सम्भव भएको हो । भारतविरुद्ध खेलको ३० औं मिनेटमा तेज तामाङको गोलसँगै नेपालले अग्रता लिएको थियो । अन्जन विष्टले गरेको कडा प्रहार भारतीय किपरले रोक्दा नेपालले पाएको कर्नरमा तामाङले गोल गरेका हुन् । अनन्त तामाङले गरेको हेड भारतीय किपर स्वस्तिक मुखर्जीको जीउमा लागेर फर्किएपछि तेजले सजिलै बल क्लियर गरी गोलमा परिणत गरेका थिए ।
निर्धारित समयमै जित नजिक पुगेको नेपाली टोलीको लागि खेलको अन्तिम मिनेट केही निराशानजक रह्यो । कप्तान बिमल घर्तीमगरको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका डिफेन्डर दिनेश राजवंशीले पेनाल्टी एरियामा हेन्ड गरेपछि भारतले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो ।
भारतीय खेलाडी सेहबाजले कुनै गल्ती नगरी टोलीलाई बराबरी स्थितिमा ल्याएका थिए । खेलको अन्तिम १० मिनेट नेपालले ५ डिफेन्डरसहित रक्षात्मक खेल खेलेको थियो । ट्राईब्रेकरमा नेपालको लागि हेमन्त थापामगर, सुनिल बल, विश्वास श्रेष्ठ, दोना थापा र अनन्त तामाङले गोल गरेका थिए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले उपाधि जित्ने नेपाली टोलीका खेलाडीलाई जनही एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार स्वरुप दिने यस अघिनै घोषणा गरेका छन् ।
ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको तयारी
Sports	| August 27th |
कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घको आयोजनामा आगामी भदौ ११ देखि १४ गतेसम्म पोखरा रंगशालामा १४ औं संस्करणको जिल्लास्तरीय अन्तरमावि स्व.इन्द्रबहादुर गुरुङ स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा छात्र एकल (१० कक्षासम्म), छात्रा एकल (१० कक्षासम्म), छात्र युगल (१० कक्षासम्म), छात्रा डबल युगल (१० कक्षासम्म), छात्र एकल, र छात्र एकलका विजेता र उत्कृष्ट उदयीमान खेलाडी एक जना गरी तीन जनालाई एक–एक थान स्पोर्टस् साइकल पुरस्कार सङ्घको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घका अध्यक्ष डम्मरसिंह गुरुङले जानकारी दिए ।
चार दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न दुई लाख ४५ हजार खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । करिब दुई सय ५० जना खेलाडीको सहभागिता रहने १४ औं संस्करणको प्रतियोगितामा निजी तथा सामुदायिक करिब २५ विद्यालयको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सङ्घका सल्लाहकार पुनर कुँवरको संयोजकत्वमा ७३ सदस्यीय मूल आयोजक समिति तथा विभिन्न १२ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ ।
जसअनुसार सङ्घका सहसचिव दुर्गाप्रसाद जोजिजूको संयोजकत्वमा सुरेशबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर गुरुङ, सन्जोग गुरुङ, मनोज श्रेष्ठ, खेमनारायण खनाल र डा. विष्णु चापागाई सदस्य रहेको प्रचार(प्रसार उपसमिति, दुर्गा जोजिजूकै संयोजकत्वमा बलभद्र नकर्मी, मीन गुरुङ, फणिन्द्र तिमिल्सिेना, शम्भु श्रेष्ठ र प्रदीप थापा सदस्य रहेको साउण्ड सिस्टम उपसमिति, कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा खेम गुरुङ, रुद्र घले, सुरेशबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर गुरुङ, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र मोहनबाबु खड्का सदस्य रहेको आर्थिक व्यवस्थापन, सदस्य डा. विष्णु चापागाईको संयोजकत्वमा खगेश्वर काफ्ले, विजय शर्मा, क्या. भूपालसिंह गुरुङ र आशिष शेरचन सदस्य रहेको स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापन समिति गठन गरिउको छ ।
यस्तै प्रथम उपाध्यक्ष रुद्र घलेको संयोजकत्वमा बलभद्र नकर्मी, सुरेशबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर गुरुङ र दुर्गाप्रसाद जोजिजू सदस्य रहेको उद्घाटन तथा समापन व्यवस्थापन उपसमिति, सदस्य सन्जोग गुरुङको संयोजकत्वमा नरबहादुर गुरुङ, खेमनारायण खनाल, फणिन्द्र तिमिल्सिेना र वीरबहादुर आले सदस्य रहेको कार्यालय व्यवस्थापन उपसमिति, सदस्य मनोजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बलभद्र नकर्मी, सुरेशबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर गुरुङ र प्रतिभा गुरुङ सदस्य रहेको पुरस्कार व्यवस्थापन, उपाध्यक्ष सुरेशबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रुद्र घले, बलभद्र नकर्मी, नरबहादुर गुरुङ र दुर्गाप्रसाद जोजिजू सदस्य रहेको टेक्निकल कमिटी गठन गरिएको छ ।
सल्लाहकार क्या. भूपालसिंह गुरुङको संयोजकत्वमा मनोजकुमार श्रेष्ठ, प्रदीप थापा, राजेन्द्र गुरुङ र वीरबहादुर आले सदस्य रहेको व्यानर व्यवस्थापन र रंगरोगन, निवर्तमान अध्यक्ष खेम गुरुङको संयोजकत्वमा बलभद्र नकर्मी, सुरेशबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर गुरुङ र बाबुराम पन्त रहेको अतिथि सत्कार, प्रतिभा गुरुङको संयोजकत्वमा रामप्रसाद ध्वजू, भूपाल गुरुङ, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, खेमनारायण खनाल, यमकुमारी गुरुङ र बुद्धिमान गुरुङ सदस्य रहेको जलपान व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ ।
१४ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा सङ्घले जिल्लाको खेलकुद विकासमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । सङ्घले हालसम्म थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन गरी कास्की जिल्लाकै शान बढाउन सफल भएको अध्यक्ष गुरुङले दाबी गरे । दक्षिण कोरियामा भएको १७ औं एसियन गेममा पुनम गुरुङले राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन टीमबाट प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् भने गत वर्ष कास्की वर्ष खेलाडी–२०७१ बाट सम्मानित भएकी थिइन्। यस्तै कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घ पनि वर्ष उत्कृष्ट खेल सङ्घको हैसियतमा कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट सम्मानित भइसहेको छ ।
एक जना नेपाली युवाको प्रयासमा न्यूजिल्याण्डले बुद्ध नेपालका जन्मेका थिए भनेर खुलेरै आधिकारिक रुपमा भनेको छ । हाल न्यूजिल्याण्ड बस्दै आएका पोखरा छोरेपाटनका प्रदीप घिमिरे गत जनावरीमा अध्ययन भिषामा न्यूजिल्याण्ड गएका हुन् । न्यूजिल्याण्डमा घुम्ने क्रममा उनी आफ्नी श्रीमतीसँग त्यहाँको प्रमुख शहर क्राइसचर्च स्थित करिब २०० वर्ष भन्दा पुरानो क्यान्टरवरी म्यूजियम पुगे । म्यूजियम पुग्नु अगाडि उनले उक्त म्यूजियमको आधिकारिक वेभसाइट पनि अध्ययन गेरेका थिए । वेभ साइटमा उनले बुद्धबारे छुट्टै पेज त देखे तर पेजमा बुद्ध र बुद्धको नेपालसँगको सम्बन्ध कतै भेटेनन् । उनी दुःखी भएर म्यूमियम भ्रमण गर्न गए तर त्यहाँ पनि बुद्ध र नेपालको सम्बन्ध कतै अभिलेख थिएन ।
म्यूजियममा गौतम बुद्धको जन्मदेशको बारेमा केही व्याख्या गरिएको थिएन तर २५०० वर्ष पहिले भारतमा बस्ने गरेका भनेर कुरा भारतमुखी बनाइएको थियो । दैनिक हजारौं स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्ने म्युजियम र म्यूजियमको वेभसाइटले यसरी दिनु पर्ने जानकारी लुकाएर वेग्लै किसिमले जानकारी दिइराखेको थियो ।
हरेक पर्यटकले बुद्ध र नेपालको सम्बन्ध थाहानपाई बुद्धलाई सिधै भारतसँग जोडेर जाने गर्दर्थे जुन म्ूयजियमले गरेको लापरवाहीको उपज हो । यो कुरा प्रदीपलाई कत्ति पनि चित्त बुझेन र उनले म्यूजियम मार्फत सत्य र महत्वपूर्ण जानकारी गराएरै छाड्ने अठोट गरे । उनले म्यूजियम सञ्चालक सँग कुरा गरे अनि बुद्ध र नेपालबारे अधिक जानकारी गराए अनि जानकारी परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । म्यूजियमका सञ्चालकले म्यूजियममा भएका बुद्धबारे जानकारी र आधिकारिक वेभसाइटमा पनि परिवर्तन गर्ने आश्वासान दिए । केही समयपछि उनीहरुले यो काम गरेर पनि देखाए र बुद्ध नेपालको लुम्बिनी मा जन्मेका थिए भनेर लेख्यो । अनि प्रदीप यो गराउन सफल भए ।
उनी भन्छन् विदेशमा बसेर मैल आफ्नो देशको लागी यति गर्नपाएकोमा खुसी छु र यो सारा देशको लागी खुसीको कुरा हो किनभने न्यूजिल्याण्डले आज खुलेरै बुद्ध नेपालमा जन्मेको कुरा दैनिक हजारौँ पर्यटकलाई सम्प्रेषण गरिरहेको छ र यो कुरा इतिहास बन्ने । क्राईसचर्चको यो क्यान्टरवरी म्यूजियम २०० वर्षभन्दा पुरानो हो त्यसैले पनि यो कुराले अब धेरै महत्व राख्दछ । आफू जहा भएपनि देशप्रति सबैले प्रेम देखाउनु आजको आवश्यकता हो र संविधान निमार्णको संघारमा पुगेका नेताहरुले पनि अब नया नेपाललाई इतिहासको संम्रक्षण गर्दै विकासको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
क्रिकेटको विश्व वरियता क्रममा नेपालको प्रवेश
Sports	| July 6th |
Leaveacomment	काठमाडौँ, २० असार । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय टी–ट्वेन्टी क्रिकेटको विश्व वरियता क्रममा पहिलो पटक प्रवेश गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले आइतबार जारी गरेको वरियता क्रममा नेपाल १५औँ स्थानमा परेको छ । यो वरियता क्रमको अन्तिम स्थान हो ।
त्यस्तै, वरियता क्रमको पहिलो स्थानमा श्रीलङ्का, दोस्रोमा भारत, तेस्रोमा अस्ट्रेलिया, चौथोमा वेष्ट इन्डिज, पाँचौँमा पाकिस्तान, छैठौँमा साउथ अफ्रिका र सातौँमा न्युजिल्यान्ड छ । त्यसैगरी, आठाँैमा इङ्ल्यान्ड, नवौँमा बङ्गलादेश, दशौँमा स्कटल्यान्ड, एघारौँमा अफगानिस्तान, बा¥हौंमा नेदरल्यान्ड्स, तेहौँमा आएरल्यान्ड र चौधाँै स्थानमा जिम्बावे रहेका छन् । नेदरल्यान्ड्सको अभ्यास खेलमा भने नेपालले खासै उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन । चार खेल खेलेको नेपालले एक खेलमा जित तथा तीन खेलमा हार व्यहोरेको थियो ।
राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता शुरु
Sports	| June 21st |
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा शनिवारदेखि पोखरामा राष्ट्रपति रनिङ शल्डि प्रतियोगिता शुरु भएको छ । प्रतियोगिताको युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले उद्घाटन गरे ।
शनिबार पोखरा रंगशालामा सम्पन्न एथलेटिक्सतर्फ सुनील चौधरी र प्रमिला चौधरीले स्वर्ण पदक जितेका छन् । सुनीलले छात्र र प्रमिलाले छात्राको १ सय मिटर दौडमा स्वर्ण हात पर्न सफल भएका हुन् ।
सुनीलले ११.५५ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै स्वर्ण चुमेका हुन् । मध्यपश्चिमाञ्चलका सुवास रत्गैया दोश्रो तथा पश्चिमाञ्चलका शक्ति सापकोटा तेश्रो स्थान हात पारे । प्रमिलाले निर्धारित दूरी १३.४५ सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक कब्जा गरिन् ।
पोखरामा राष्ट्रिय महिला क्रिकेट सुरु
Sports	| June 11th |
पोखरा रंगशालामा वुधबारदेखि प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको क्यालेण्डर अनुसार पोखरामा आयोजना गरिएको यो अहिले सम्म कै सबै भन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बने पनि ठुला राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएका थिएनन् । बुधबारको उद्घाटन खेलमा सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ) विजयी भएको छ । दोश्रो खेलमा नेपालगञ्जले स्थानीय पोखराको टिमलाई पराजित गर्यो ।
पहिलो खेलमा एपीएफले क्षेत्र नम्बर–१ विराटनगरलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै जित हात पार्न सफल भयो । टस जितेर व्याटिङमा मैदान उत्रेको विराटनगरले १९ ओभरमा अल आउट हुदै ४८ रनको योगफल निकाल्यो । विराटनगरले दिएको लक्ष्यलाई सजिलै एपीएफले पुरा ग¥यो । ४९ रनकोे लक्ष्य पाएको एपीएफले १२ दशमलव ५ ओभरमा ४ विकेट क्षतीमा लक्ष्य पुरा गरेको हो । खेलमा एपीएफकी सिता राना मगर ‘प्लेर अफ दी म्याच’ घोषित भईन ।
दोश्रो खेलमा क्षेत्र नम्बर–५ नेपालगञ्जले ९ विकेटले क्षेत्र नम्बर–८ पोखरालाइ पराजित गरेको छ । टस जितेर व्याटिङमा उत्रीदै पोखराले ६ विकेट क्षतिमा ६ ओभर खेल्दै १६ रन जोडे पनि पानी परेका कारण खेल प्रभावित भएको थियो । वर्षा रोकिएपछि फेरि सुरु भएको खेलमा पोखराले नेपालगञ्जलाई ५ ओभरमा १३ रनको लक्ष्य दिएको थियोे । नेपालगञ्जले १ दशमलव ५ ओभरमा एक विकेट क्षतिमा लक्ष्य पुरा गर्दै ९ विकेटले जित हात पा¥यो ।
व्यवस्थापिका संसद विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै सरकारले भन्दा खेलाडी र खेलप्रेमीको आफ्नै प्रयासबाट क्रिकेटले सफलता पाएको बताए । नेपालको खेलकुदमा क्रिकेटले उच्च स्थान हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सभापति अधिकारीले सरकारले क्रिकेटको खेल मैदान निर्माण र खेलकुदलाई निरन्तरता दिनु पर्ने धारणा राखे । उनले खेल पर्यटनको दृष्टिले क्रिकेट सम्भावना युक्त खेल भएको बताए । उनले नेपालका ८ मुख्य शहरमा प्रयाप्त सुविधा सहितको क्रिकेट मैदान आवश्यक भएको बताए । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट भएको हारलाई स्वीकार गर्ने सवाल खेलाडीबाट राजनितिज्ञले सिक्न पर्ने उनले बताए ।
विहीबार क्षेत्र नम्बर–३ काठमाडांै र क्षेत्र नम्बर–८ पोखरा तथा एपिएफ र क्षेत्रनम्बर–५ नेपालगञ्जबीच खेल हुनेछ । नेपाल क्रिकेट संघको सहयोग र क्षेत्रीय क्रिकेट विकास समिति, क्षेत्र नम्बर–८ पोखराको आयोजनामा उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको हो । असार २ गतेसम्म संचालन हुने प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी वलको एपिएफ सहित १० टिम सहभागि हुने क्षेत्रीय क्रिकेट विकास समिति क्षेत्र नं.८ पोखराका अध्यक्ष देवेन्सन प्रजुले बताए ।
समुह ‘ए’ मा क्षेत्र नम्बर–१ विराटनगर, क्षेत्र नम्बर–३ काठमाण्डौं, क्षेत्र नम्बर–५ नेपालगञ्ज, क्षेत्र नम्बर–८ पोखरा र विभागीय सशस्त्र प्रहरी वलको एपिएफ बीच हुने भएको अध्यक्ष प्रजुले बताए । त्यसैगरी समुह बी मा क्षेत्र नम्बर–२ वीरगञ्ज, क्षेत्र नम्बर–४ भैरहवा, क्षेत्र नम्बर–६ बैतडी, क्षेत्र नम्बर–७ जनकपुर र क्षेत्र नम्बर–९ धनगढी रहेका छन । समुह ‘ए’ को खेलसहित सेमिफाईनलदेखि फाईनलको खेल पोखरामा हुनेछन् । समुह बी का लिग चरणका खेल भने चितवनमा हुने अध्यक्ष प्रजुले बताए ।
Recent Posts	नेपाली जनताका सामु किन गल्यो भारत ?
Recent Comments	Delete vaisakeko hunx, matra 2…